Iityhubhu zeFlorescence zibambe i-barbecue yonyaka yolwandle ngomsebenzi wangoMgqibelo. Sasidlala kunye, sosiwe inyama, sicule size sidanise ngapha nangapha komlilo. Abahlobo abaninzi bamanye amazwe nabo bathatha inxaxheba kwimidlalo nakwizinto esizenzayo. Sithanda iimveliso zethu kunye nomsebenzi wethu ...
I-Florescence iya kuya kwi-SEMA Show eLas Vegas ngoNovemba 5-8
UFlorescence uza kuya kwi-SEMA Show eLas Vegas, e-USA, ngo-Novemba-5 ukuya ku-8. Siza kubonisa iimveliso zethu zidiniwe iityhubhu zangaphakathi kunye neeflap apho, sijonge phambili ukuhlangana nawe kwindlwana engu-41229! singakwazi ukubonelela ngemibhobho yangaphakathi yebutyl kunye neetyhubhu zerabha zendalo zamavili njengasezantsi. ATV iTire Yangaphakathi Tube Wamavili iTire Engaphakathi Tube ...
Ukususela ngoMeyi-12 ukuya kuMeyi 13, 2020, iQingdao Florescence International Trade Co., Ltd. waba nethamsanqa lokumema uMnu. Kwezi ntsuku zimbini, oogxa babo Bonke bathathe inxaxheba ngokuzimisela, bafunda ngokuzimisela, kwaye bafumana lukhulu, ...